အမေရိကန် RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
Rusya’nın batısından yola çıkan iki petrol tankeri buzulları eriyen Arktik üzerinden Çin’e ulaştı. Rota ve taşınan petrol ABD’ye verilen bir mesaj niteliği taşıyor. Rotayla ABD donanmasının kontrol ettiği suyolları da [ပို ... ]
Sao Paulo Metrosu Haritası : 1974 yılında işletmeye açılan San Paulo Metrosu6hatta ve bir de monoray hattına sahip olan dev bir demiryolu ağı. Bu hatların içinde 2014 yılında açılan [ပို ... ]
ကနေဒါ၊ အွန်တိုရီယို၊ ဘရက်ခ်ဗေးလ်ရှိသမိုင်းဝင် Brockville မီးရထားဥမင်လိုဏ်ခေါင်းသည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ကနေဒါနိုင်ငံ၏သက်တမ်းအရင့်ဆုံးရထားလမ်းဖြစ်သောဥမင်လိုဏ်ခေါင်းသည် 1854 တွင်စတင်ဆောက်လုပ်ပြီး 1860 တွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အရှည်မီတာအရှည်ရှိသည်။ [ပို ... ]
ယနေ့နည်းပညာတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်ပိုမိုလွယ်ကူလာသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, အင်ဂျင်နီယာများသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပိုမိုလွယ်ကူမြန်ဆန်စေရန်လုပ်ဆောင်နေကြသည်တစ်ခုဖြစ်သည်တစ်ခုဖြစ်သည် [ပို ... ]
Hitachi လီမိတက်၏လက်အောက်ခံ Hitachi Vantara သည် 4.0 အတွက်အတုထောက်လှမ်းမှုထုတ်လုပ်သည့်စက်ဖြင့်စက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဆိုင်ရာအဖြေများသည်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အရည်အသွေးရလဒ်များကိုအမြင့်ဆုံးဖြစ်စေသည်။ [ပို ... ]
လူသားတို့ကိုရာစုနှစ်ကျော်ရွှေ့ပြောင်းနှင့်ရွှေ့ပြောင်းစဉ်အတွင်းရှည်လျားလမ်းများရှိပါတယ်သိရသည်။ ဒီဖှံ့ဖွိုးတိုးတအပြီးတွင်အဆိုပါရေနွေးငွေ့-မောင်းနှင်မော်တော်ယာဉ်များနှင့်ပြည်တွင်းလောင်ကျွမ်းအင်ဂျင်များ၏တီထွင်မှုနှင့်အတူစက်မှုတော်လှန်ရေးအပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ကြိမ် [ပို ... ]
ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာရှိတဲ့စက်တင်ဘာလ 23 နယူးယောက် Penn ဘူတာနှင့်ပြည်ထောင်စုဘူတာကနေကုမ္ပဏီတခုမှရပ်တန့်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားဝန်ဆောင်မှုကိုရှင်းပြကိုစတင်မယ်လို့သူကလိုင်းသာပတ်အတွင်းတက်ကြွစွာပါလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။ Amtrak NEW HEADING [ပို ... ]
Dünyanın en prestijli Motor sporları etkinliklerinden olarak gösterilen The Quail, 17. kez The Peninsula Hotels tarafından gerçekleştirildi. Tüm dünyadan en seçkin ve nadir bulunan koleksiyon parçalarının sergilendiği etkinliğe James Masden, [ပို ... ]
အမေရိကန်က Google က Apple, Microsoft နှင့်အညွှန်းမြေပုံ၏အခြားနည်းပညာကုမ္ပဏီများအတွက်အသွားအလာဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုထိန်းချုပ်ကြောင်းအဖွဲ့အစည်းများ, United States မှာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအဆင့်ကိုဖြတ်မှာဖြစ်ပေါ်မတော်တဆမှုအတွက်လူရာပေါင်းများစွာအသက်အတွက်ဖြစ်စေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ Institution များသတိပေးချက်များ [ပို ... ]